Akụkọ - Amụma zuru ụwa ọnụ na-ehichapụ ga-eru $ 19.6 ijeri 2021
(UK, 28 November 2016) Ọdịnihu nke Global Nonwoven Wipes na 2021 kwuru na ahịa zuru ụwa ọnụ na-ehichapụ bara uru na $ 14.8 ma ga-eri 1.1 nde tọn nke ndị na-enweghị ego na 2016. Site na 2021, a na-atụle amụma ịbawanye na $ 19.6 na ndị na-enweghị ego oriri na-eto eto ruo 1.4 nde tọn.
A na-ere ahịa nke nhichapụ na-enweghị isi site na ọnụ ahịa, ịdị mma, ịdị ọcha, arụmọrụ, ịdị mfe nke iji, oge nchekwa, mkpofu, nchekwa / usoro iwu na ndị ahịa na-ahụkarị mma (ya bụ ịdị nro ma ọ bụ ịba ụba na nhichapụ ụmụaka). Isi ọkwọ ụgbọala dị iche maka isi nonwoven ehichapụ agba. Ndị ahịa na-ehichapụ ahịa na-ebugharị site na ọnụahịa, ndị ahịa na-ahụkarị mma, mma, ịdị mfe nke iji, oge nchekwa, arụmọrụ, nghọta gburugburu ebe obibi na mkpofu.
Ndị na-azụ ahịa na-ere ahịa ala, na-eduga n'ọganihu dị elu karịa na-ehichapụ aha nwa na nhichapụ ụmụaka, ebe ha na-eme ka uto dị elu na-ehichapụ ma na-ehichapụ nke ọma. Ndị na-azụ ahịa bụ ndị dị njikere ịkwụ ụgwọ maka ịdị mma na nchekwa oge nke nhicha ihu na-eme ka 'regress' ugbu a wee laghachi na akwa akwa na nhicha ihu. N'otu aka ahụ, ihe nhicha ụlọ dị ọcha dị oke ọnụ ejiri nhicha mmiri na akwa nhicha dochie anya ya. Onye na - eri ya nwere ike ịkwụ ụgwọ naanị maka ịdị mma na oge echekwara na ngalaba ụfọdụ dị mkpa, dị ka nhichapụ ụmụaka ma ọ bụ nhicha siri ike.
Ihe nhichapụ nke ụlọ ọrụ nwere ndị ọkwọ ụgbọ ala dị iche iche. Gwọ dị oke mkpa, agbanyeghị na ngalaba ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ego na-abụkarị nchegbu kachasị. Iji nhicha bụ akụkụ nke ụgwọ azụmaahịa; mma na aesthetics nwere ọtụtụ ala mmetụta. Nchedo na uru ahụike bụ ndị ọkwọ ụgbọ ala kachasị mkpa maka nhichapụ ụlọ ọrụ eji arụ ọrụ ahụike ma ọ bụ ọrụ nri (dịka ọmụmaatụ, mkpofu na-enweghị mkpochapu na-ehichapụ ihe mmetọ na ihe eji akwa akwa) Linessdị ọcha na ịdị mma na-agbanwe agbanwe bụkwa ndị ọkwọ ụgbọ ala dị mkpa na ụfọdụ ngwa (dịka ọmụmaatụ, otu nnukwu ojiji nke nhichapụ ụlọ ọrụ bụ ụlọ ọrụ ụgbọ ala, ebe a na-eji nhichapụ iji kpochapụ mmanụ ụgbọala niile na-ebu ụzọ tupu eserese; ebe a, ịcha akwa ma ọ bụ nhicha ala adịghị elu. nwere ike ime ka eserese na-esote akpaghị aka ghara ịnakwere, na-achọ ịmegharị ihe dị oke ma dị oke ọnụ). Na nhichapụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụgwọ iji nweta ihe a chọrọ bụ onye ọkwọ ụgbọala kachasị elu.
Generalfọdụ usoro izugbe a na-ahụ anya site na ọgụgụ dị n'elu bụ:
• Total ehichapụ ahịa ibu na atumatu olu na-adịghị nwayọ nwayọ site 2021
• Baby na-ehichapụ dị ka pasent nke mkpochapu mkpochapụ ga-ajụ dị ka ọkachamara onwe onye na nlekọta ụlọ na-ehichapụ ha, karịsịa na ahịa ndị na-apụta
• Naanị nhichapụ nlekọta onwe onye na-eme atụmatụ ka ọ na-eto na ogo dị elu karịa nkezi
• Nlekọta ụlọ na nhichapụ ụlọ ọrụ na-eme atụmatụ itolite n'ihe dịka nkezi
Ihichapụ ụmụaka na-aga n'ihu na-ebelata uto, nke mbụ n'ihi na ha bụ akụkụ ahịa kacha tozuru etozu na-ehichapụ ndị na-azụ ahịa, na nke abụọ, n'ihi mmụba dị elu na nhichapụ. Otu ihe atụ nke ikpe ikpeazụ bụ nwatakịrị na-eto eto nke nwere ike ịsachapụ, nkewa dịka nlekọta onwe onye. N’akụkọ ihe mere eme, e jiri nhichapụ ụmụaka mee ihe maka akụkụ a. Na mgbakwunye, ka ọnụ ahịa ndị ahịa kacha ọnụ na-ehichapụ, n'oge nsogbu nke akụ na ụba ndị na-azụ ahịa jiri nhichapụ ụmụaka na-ehichapụ ọpụrụiche pụrụ iche; n'agbanyeghị nkwụsị akụ na ụba na China na Brazil, na nsogbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Turkey, Iran na Russia, amụma site na 2016 - 21 bụ maka mmụba akụ na ụba n'ozuzu. Nke a ga - ebute nwayọ nwayọ maka ihichapụ ụmụaka. Onu ogugu mmadu n’usoro omumu omumu n’ulo ahia ndi mepere emepe na North America na Western Europe sokwa.
Nlekọta nlekọta onwe onye na-eme atụmatụ ịbụ akụkụ nke ndị na-eto ngwa ngwa na oge ọmụmụ ihe niile. Ọ bụ ezie na nhichapụ ndị a, ọkachasị ụfọdụ ụdị ahaziri iche na nke dị ọnụ ala karị, enweela nsogbu ọnọdụ akụ na ụba ụwa, ihe ngosi na-egosi na ha na-eto eto ọzọ na ndị ahịa n'ahịa na-apụta ga-amalite dochie anya nhichapụ ụmụaka na-ehichapụ nke ọma. Ngwunye a gbakwunyere n'oge na-adịbeghị anya nke ikike imepụta ihe na-enweghị atụ ga-agbakwunye uto na-ehichapụ ihe na-ehichapụ ụwa niile ka ọkọnọ na-eto ma ọnụ ahịa daa.